Sheekada filimka Mersal: Vijay wuu ku fara yareestay filimkaan aan marnaba laga xiiso dhigeyn | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Mersal: Vijay wuu ku fara yareestay filimkaan aan marnaba laga xiiso dhigeyn
Sheekada filimka Mersal: Vijay wuu ku fara yareestay filimkaan aan marnaba laga xiiso dhigeyn
Superstar Vijay iyo Director Atlee 2016 waxay la imaadeen filimkii Blockbuster-ka noqday Theri haatana feestada Diwali waxay soo diyaariyeen filimka hadal heyntiisa lala yaaban yahay Mersal.
Hadaba labada guusha u saaxiibka ah mucjisadii Theri kadib Mersal ma ku qaban doonaan fanka Tamil Kollywood ayaa ah dooda ugu weyn ee haatan taagan?
Jilaayaasha filimka Mersal: Vijay, Samantha, Kajal Aggarwal, Nithya Menen, SJ Suryah, Sathyaraj, Vadivelu, Kovai Sarala, Haresh Peradi
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 50-daqiiqo.
Fariinta Mersal Oo Kooban: Dadka ka shaqeeyaan caafimaadka daaweynta shacabka dhaqaatiir iyo kal kaaliyaal kala duwan ayaa la dilay sidoo kalena la afduubtay, kadib askariga u xil saarin baaritaanka kiiskan wuxuu kaga shakinaa inuu ka dambeeyo Dhaqtar kooxda caafimaadka ka mid ah.
Hadaba dhaqtarka laga shakiyay ma yahay qofka dambiyadaan ka dambeeyo? Sidoo kalena maxaa loo dilaa dhaqaatiirta iyo dadka caafimaaadka ka shaqeeyaan hadiiba ay shacabka u adeegaan?
Sheekada Filimka Mersal Oo Fidsan: Dr Maran (Vijay) waa dhaqtar bad baadiyo nolosha dadka dhibanaha ah wuxuuna adeeg walbo oo qaali ah xitaa ku qabtaa bilaash 5 Rupees ka badan kama qaado bukaanka.
Laakiin Dr Maran (Vijay) oo shaqadiisa ku guda jiro waxa u imaanayo isbatoore Rathnavel (Sathyaraj) oo ku eedanayo dhaqtarkaan samafalka badan inuu dilo sidoo kalena afduubto dadka kale ee caafimaadka kala shaqeeyaan.
Laakiin isbatoore Rathnavel (Sathyaraj) wuxuu ogaanaa in kiisaska dilka iyo afduubka dadka inuu ka dambeeyo Vetri (Vijay) nin sixiroow ah oo awood badan kaaso oo u eg Dr. Maaran (Vijay).
Hadaba aqristayaal Vetri oo ah sixirowga awooda badan iyo Dr. Maaran xiriirka ka dhaxeeyo ayaa ah inay walaalo yihiin sidoo kalena aabahoodii Vetrimaaran (Vijay) 70-maadkii la dilay asigoo shacabka u adeego sidoo kalena dhisaayo isbitaal dadka si lacag la’aan ah loogu adeego.
Vetrimaaran (Vijay) xaaskiisii Aishwarya (Nithya Menen ) waxaa geerideedii ka dambeeyay Dr. Daniel (S. J. Surya) oo marka ay dhaleesay wiilkeeda labaad Vetri qaliin ku sameeyay iyadana waxay u dhimatay dhiig bax ayadoo si caadi ah u dhali kartay wuxuuna rakaato lacag ka rabay Vetrimaaran sidoo kalena Vetrimaaran dilkiisii waxaa maleegay Dr. Daniel.
Vetri wuxuu rabaa inuu ka aarguto Dr. Daniel sidaa darteed xabsiga ayuu ugu tagaa Dr. Maaraan wuxuuna u sheegaa runta iyo inay walaalo yihiin kadibna waxay ku heshiinayaan sidii ay Dr. Daniel oo mudo dheer ka hor waalidkooda dilay sidii ay kaga aar gudan lahaayeen.
Vetri dhaqtar kasto oo dadka laaluush ka qaato nafta ayuu dhaafiyaa hadafkiisana wuxuu yahay inuu Hindiya ka sifeeyo kuwa adeega caafimaadka dadka ku dhiig miirtaan.
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Mersal: Director Atlee, qoraa Vijayendra Prasad (ninka qoray Magadheere, Bajrangi Bhaiaan iyo Baahubali labadiisa) qeybood marka ay midoobeen iyo hogaanka oo Super Star Vijay haayo waxaa kasoo baxay filim lagu magacaabo Mersal kaasi oo lagu tilmaamay 2017 filimka ugu mada daalada wacan.
Mersal waa filim aad u dheeli tiran xaqiiqdii 100% malahan hal muuqaal oo dayacaad ka muuqato waana filim dhameestiran sheeko, dareen, murugo, Action iyo xeeladaha la isaga aarguto.
Director Atlee wuxuu ku aamanan yahay mashruuca Mersal sida uu isugu daba riday waad hilmaami doontaa Atltee iyo Vijay inay wada sameeyeen filimkii hirgalay Theri ee 2016 lala yaabay.
Bandhiga Jilaayaasha Mersal: Waa hubaal hadii aan taageero u ahayn xitaa Vijay inaad ku jeclaan doonto filimka Mersal sedexdiisa door mid walbo midka kale ayuu ka wacan yahay, inkastoo Mersal uu yahay filimkiisa 61-aad hadana waxaa lagu tilmaami karaa midkiisa ugu jiliinka wacan yahay intaas ayaa amaan ugu filan Super star-kaan cirka maraayo.
Labada atirisho Kajal Aggarwal (jaceylka Dr. Maaraan sidoo kalena kal kaalisadiisa ah) iyo Samantha (gabbar wariye ah oo saxaafada ka shaqeyso) doorkooda kooban wey kasoo dhalaaleen inkastoo Mersal uu yahay filim min bilaaw ilaa dhamaad Vijay lagu xeen daabay sheekadiisa.
Laakiin Nithya Menen ayaa la siiyay door saameyn leh waayo bandhigeeda dhanka murugada iyo xanuunka ay shaashada kusoo bandhigtay iyo qaybta la siiyay ayaa ka dhigtay in Mersal ay sheekadiisa gabadhaan furo u tahay.
S J Suryah doorkiisa Dr. Daniel si aad u wacan ayaa loo diyaariyay weliba qaybaha dambe filimkan saameyn weyn ayuu ku leeyahay iyo doorkiisa xasuus ahaan laguugu tusaayo sida uu u yahay sheydaan dhiig cabbe ah oo bukaanka u nixin balse dhiig miirto oo lacagta ahmiyada siiyo.
Gunaad: Mersal waa filim heer sare ah oo ay fanka Kollywood ku faani karaan, Vijay iyo Atltee waxay hordhac inoo siiyeen dhamaadka filimkaan in Mersal qayb labaad laga sameyn karo madaama Vetri (Vijay) marka la xiro uu wacad ku maraayo inuu dib usoo laaban doono kuwa shacabka dhiigooda miirto dhanka caafimaadkana uu dabar goyn doono sidoo kalena Dr. Maaraan (Vijay) isagoo Tv-ga daawanayo wuxuu aqbaaar ahaan u arkaa in qof bukaan ah u dhintay dayacaad daawo!
Sidaa darteed Mersal-kaan lala yaabay oo dhan walbo ka dheeli tiran waxaan ka codsan laheyn Director Atltee iyo Superstar Vijay sida ugu dhaqsiyaha badan inay qayb labaad kaga sameeyaan.
Dadka filimada ka faaloodaan Mersal waxay siiyeen 4-xidig (4/5) waxaana lagu tilmaamay Baahubali 2 kadib filimka ugu wacan oo ay Koonfur Hindiya sameeyaan 2017 dhan walbo fariin ahaan.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Mersal:
Waxaa Aqrisay 889